N'ogbe Multi-size doro anya Matte Frosted Glass kandụl ite na mkpuchi ụlọ ọrụ na-emepụta | Mmeri
iko kandụl ite
1. Machine gbawara / enwe, ọtụtụ-eji na ụlọ oriri na ọ restaurantụ /ụ / nkwari akụ / n'ụlọ / ọzọ wdg
2. Akara ahaziri, ụkpụrụ, nha na agba wdg nwere ike ịme dị ka eserese gị.
3. Eco-Enyi na-abụghị na-egbu egbu, nri mma ọkwa iko ahu. O nweghi BPA, ndu, cadmium ma obu ihe ndi ozo ojoo n’aru mmadu. Nchekwa na mbupụ siri ike mbupụ na-emesi obi ike na mbupu nchekwa.
Na okwu, size 、 logo 、 agba niile nwere ike ahaziri, anyị n'ezie nwere ike inye gị ezigbo mma, ọkpụrụkpụ price na n'elu-ogo mgbe ire ọrụ.
Emecha Frosted / matte
Nha D7.2cm * H9.1cm D8.2cm * H9.8cm D9cm * H11cm D10cm * H13cm
Ihe onwunwe Iko iko friji na mkpuchi mkpuchi
Ibu ibu 225g 345g 420g 630g
Agba White, nwa, isi awọ, agba nwere ike ahaziri
Ojiji Kandụl Ndinam / Home mma
Ọzọkwa, Enwere ike ime ite iko kandụl na nsonaazụ dị iche iche, dị ka matte 、 frosted 、 polished 、 spraying. Nwere ike ịhọrọ mmetụta ịchọrọ. N'ezie, ọ bụrụ n'ịchọrọ ibipụta akara aka gị ma ọ bụ akara gị na iko iko ahụ, anyị nwekwara ike ịme. Naanị ị ga-ezitere anyị atụmatụ gị, anyị nwere ike ịnye gị nsụgharị maka nrụtụ aka.
Nke gara aga: Efu matte iko kandụl ite
Osote: frosted matte iko efu kandụl njide-champeenu / Green
Black Glass kandụl ite
Kandụl Glass ite na Osisi mkpuchi
Omenala Glass kandụl ite
Efu Glass kandụl ite
frosted matte iko efu kandụl njide-champe ...
frosted efu kandụl akpa iko ite